Shina Fananganana orinasa mpamokatra rano sy herinaratra | Zhenyuan
Fanohanana mailaka design2020@vip.163.com
Tetikasa sary sary
Trano ho an'ny daholobe
Trano avo miakatra
Sokajy famokarana indostrialy
Miorina firafitry ny membrane
Net Frame, Kilasy firafitry ny heterosexuel
Drafitra fananganana rano sy herinaratra
Class Frame vy
Drafitra drafitra fananganana
Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title= & oldid = 24265579 '' tetikasa injeniera. Io no fototra iorenan'ny famaritana ny vidin'ny tetikasa sy ny fandaminana ny fanamboarana, ary koa ampahany lehibe amin'ny trano ....
Ny famolavolana rano sy herinaratra dia fiarovana, azo ampiharina ambonin'izany rehetra izany, dia ny firavaky ny firavaka manaraka. Ny fitsipiky ny famolavolana rano sy herinaratra dia ny tsy ahafahana mihetsika, aza miova mora foana; raha mety ho maizina dia ho maizina. Tsy avela ny tsipika mamirapiratra.
Stylist dia maniry araka ny toe-javatra manokana an-trano, tsindrio soa aman-tsara → fiarovana ny tontolo iainana → fitehirizana angovo → azo ampiharina → ny baiko izay hojerena ny vokany, maniry ny tany ivoahan'ny toerana farany manome fahafaham-po ny fangatahan'ny tompony.
Araka ny fepetra takiana amin'ny lahasa famolavolana, ny sary fanamboarana ny famatsian-drano sy ny fanatobiana rano dia tokony hahitana ny sary amin'ny endriny (drafitra ankapobeny, drafitra fananganana), sary sary, sary antsipiriany momba ny fananganana (sary santionany lehibe), famaritana sy famaritana momba ny fananganana ary ny lisitra ny fitaovan'ny fitaovana lehibe, sns.
Ny drafitry ny famatsian-drano sy ny fantsakana dia tokony haneho ny firafitry ny fantson-drano sy ny fantson-drano ary ny fitaovana ilaina.
Ny famatsian-drano sy ny tatatra anatiny dia ampiasaina hamaritana ny isan'ny drafitry ny gorodona. Ny gorodona sy ny lakaly any ambanin'ny tany dia tsy maintsy hosodoko; Raha ny tanky ambony rihana dia misy fitoeran-drano sy fitaovana hafa, dia tsy maintsy nosintonina tsirairay koa izy ireo; ny gorodon'ny tranobe, toy ny fidiovana na fitaovan'ny rano, dia mitovy ary drafitra mahazatra no azo sintonina; Raha tsy izany dia tokony hosarihana isaky ny gorodona izy io. Misy karazana fantsona maromaro azo sintonina amin'ny drafitra iray. Raha sarotra ny fantsona dia azo sintomina misaraka ihany koa izy ireo. Ny fotokevitra dia ny maneho ny sary mazava tsara ny fikasana raha ny isan'ny sary dia kely. Ny fantsona sy ny fitaovana dia tokony hasongadina ao anaty drafitra, izany hoe ny fantsona dia asiana tsipika matevina, ary ny ambiny dia tsipika manify daholo. Ny refin'ny drafitry ny gorodona dia mitovy amin'ny an'ny drafitry ny fananganana. Ny refy ampiasaina matetika dia 1: 100.
Ny drafitry ny famatsian-drano sy ny tatatra dia tokony hilaza ireto atiny manaraka ireto: karazana, habetsahana ary toerana misy ny efitrano sy fitaovana fampiasan-drano; Ny fantsona fantsona rehetra, kojakoja fantsona, fitaovana fidiovana, fitaovana rano, toy ny boatin-drivotra afo, lohan'ny famafazana sns., dia aseho amin'ny angano; Ny savaivony sy ny tampon'ny karazana fantsona marindrano, ny fantsona mitsivalana ary ny fantson'ny sampana dia tokony homarihina.
Famaritana ny sary hydropower:
Izy io dia ny sarin'ny firafitra sy ny toerana misy ny rafitry ny famatsian-drano, ny rafi-drano sy ny fitaovana elektrika, ny lalana misy ny tariby ary ny jiro ao an-trano, ary io no fototry ny fananganana ny rano sy herinaratra ao an-trano.
Sary mahery ankehitriny1
Sary momba ny famatsian-drano
Sary mahery ankehitriny2
Previous: Class Frame vy
Manaraka: Net Frame, Kilasy firafitry ny heterosexuel
Fampisehoana ampahany amin'ny vokatra avy amin'ny orinasa
Fanasokajiana ho an'ny olombelona sy ny famolavolana endrika
Fampiharana vokatra ho an'ny orinasa
China Zhenyuan Steel Structure Engineering CO., LTD dia mpandraharaha mpanao vy vy matihanina mampiditra endrika, fanamboarana ary fametrahana.
Address: Tianjin sy Yunnan, Sina
Contact: Andriamatoa Lin
Ora fiasana (ora Beijing): 8:30 ~ 18:30